Hafatry ny mpiandraikitra Foibe MF 07/SL XV – FJKM Ambavahadimitafo Hafatry ny mpiandraikitra Foibe MF 07/SL XV |
Hafatry ny mpiandraikitra Foibe MF 07/SL XV
Am-pifaliana no anambarana amintsika fa natao tao anatin’ny fivoriana ara-potoana faha-7 tany ANTSIRABE ny 17-24 OKTOBRA 2007 ny fametrahana ireo tomponandraikitry ny Sampana Foibe voafidy tamin’ny Zaikabe sy Komity Lehibe farany teo, izay hiasa mandritry ny 4 taona
Indreto misy hafatra atolotra ny fiangonana:
Tsapan’ny fiangonana ny fahasarotan’ny fiainana izay lalovan’ny sarambabem-bahoaka. Koa manao antso ho an’ny fitondram-panjakana izahay mba hijery manokana ireo mila vonjy vokatr’izany fahasarotam-piainana izany. Entanina koa ny fiangonana amy hanao ezaka azo tsapain-tànana hitsinjovana ireo izay tena sahirana, araka ny voasoratra hoe “Tamin’ny fahoriana be nizahan-toetra azy no nitomboan’ny hafaliany ary ny hamafib’ny fahantrany no nampitombo ny haren’ny hitsim-pony”(II KOR 8/2)
Mahavelom-panantena ny nandre ny akon’ireo ezaka fitoriana Filazantsara amin’nyHetsika JKM manerana ny SP izay notanterahina miaraka.Koa mankasitraka ireo SP tsirairay nanano ezak tamin’nyizany izahay ary ampirisihana hatrany isika mbola hanezaka bebe kokoa. Koa ny Herinandro Masina amin’ny taona 2008 dia haompana amin’ny antso ho an’ny fibebahana. Hisy ny fandaharana iombonana haparitaka amintsika rehetra momba izany.
Momba ny Oniversite FJKM RAVELOJAONA dia efa am-perinasa izao ireo komity ary mioso tsar any asn’izy ireo. Ho rentsika tsy ho ela ireo dinidinika momba ireo seham-pampianarana ho sokafana.
Iaraha-mahalala ireo vokatsoa azo avy amin’ny Radio Fahazavana. Noho izany dia hisy ny ezaka fanapariahana io Radio-ntsika io hahatratra faritra maro kokoa.
Mitohy ny fanomanana ireo zava-dehibe hodinihina any amin’ny Synoda Lehibe izay hatao any Mahajanga ny 13-20 AOGOSITRA 2008. Koa hamafiso hatrany ny fitondrana am-bavaka izany Synoda izany mba tena hiasan’ny Fanahin’Andriamanitra ka hisehoan’ny fahendren’Ilay Lohan’ny Fiangonana, dia I Jesoa Kristy.
Mbola eo an-dalam-pamitana ilay tranom-pivoriana (CFD) ao Ampandrana izao, koa entanina isika rehetra mbola hanohy ny Talenta any amin’ny isam-piangonana,izay efa nifanekentsika ho fandraisana anjara amin’ny famitana izny trano izany.
“koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe. Fa tokony hanana faharetana ianareo mba hahazoanareo izay lazain’ny teny fikasana, rehefa vitanareo ny sitrapn’Andriamanitra” (Heb 10/35-36)